AdraInformatica - Teknụzụ, akụrụngwa, ngwanrọ, ntuziaka & ngwa
Teknụzụ, Akụrụngwa, Akụrụngwa, Ntuziaka & Ngwa
Ezitere na August 23, 2021
Ntuziaka maka egwuregwu vidiyo Bayonetta 3
Bayonetta 3 bụ nkeji nke atọ, nke PlatinumGames haziri ma mepụta, nke ama ama na mbanye anataghị ikike nke na -ese amoosu ama ama. Emebere egwuregwu vidiyo a maka Nintendo Switch, Nintendo console.
Egwuregwu vidio a tụrụ aro nke ukwuu nye ndị niile hụrụ egwuregwu a bụ Bayonetta 3. Egwuregwu vidiyo a oge obula amara nke oma n’etiti ndi n’eso ya na ndị kpebiri ịnwale ya. Ọ makwaara na igwu egwuregwu Bayonetta 3 bụ ihe ịtụnanya.
N'ime ntuziaka na -esonụ, ị ga -ahụ ozi nke ị ga -eji malite ịkpọ Bayonetta 3 ga -adịrị gị mfe. Na mgbakwunye, o nwere ndụmọdụ ịmalite egwuregwu ahụ na -enweghị ịbụ nduru dara n'akwụ, n'ihi na n'agbanyeghị na ị nwere ike ghara ịbụ ọkachamara, opekata mpe ị ga -amụta ihe ndị bụ isi.
Kedu mgbe bụ egwuregwu mbụ nke egwuregwu ahụ?
Otu n'ime ụbọchị kachasị atụ anya maka Fans nke Bayonetta 3 es ụbọchị mwepụta, n'oge a, a ga -ewepụta egwuregwu vidiyo ma ọ ga -adị na consoles-dị. Otu n'ime ihe kacha achọsi ike bụ ịmara ohere ndị ahụ ọ ga -ewepụta yana ozi nke ọ ga -eju ọha na -eso ya anya.
Ndụmọdụ maka ịpụ na Bayonetta 3
Ya mere o kwesiri ka ibido banyere aghụghọ ga -abara gị uru, ka oge Bayonetta 3 dị n'aka gị, ị ga-enweta egwuregwu na nsonaazụ kacha mma. Ndị a bụ ụfọdụ.
Nweta ahụ ma bulie ọkwa gị: Ịkwalite na ịpụ apụ ga -enye gị ohere ndị ọzọ, ị ga -eritekwa uru karịa ndị egwuregwu ndị ọzọ. Nke a bụ otu ị ga -esi bulie ohere nke agwa gị, yana nka gị.
Chọpụta nke Bayonetta 3 nwere: Agaghị enwe ngwa agha ka mma karịa ozi. Iburu n'uche nke bụ ngwaọrụ egwuregwu vidiyo a na -etinye n'aka gị iji merie ihe mgbochi dị mkpa iji dozie nsogbu ozugbo enwere ike.
Mee atụmatụ ọhụrụ: Ọbụna ma ọ bụrụ na i wuru otu atụmatụ nke ị nwere ahụ iru ala, akwụsịkwala ịnwale ihe ọhụrụ, ebe ọ na -enye gị ohere ịchọpụta usoro bara uru nke ga -enyere gị aka imeziwanye.
Hazie njikwa na ntọala: Gbanwee nkọ, njikwa na ntọala niile ị nwere ike ime ka ịmere gị ihe dị mfe. Ịhazi njikwa ahụ na -enye gị ohere ịmegharị egwuregwu ahụ na mkpa gị ka nsonaazụ gị ka mma.
Nyiwe ebe ị nwere ike nwalee Bayonetta 3
Ọ dabara nke ọma, egwuregwu vidio ahụ nwere ike igwu dị iche iche consoles na PC, mgbe ahụ, ọ nweghị ihe ngọpụ ịkwụsị ịnwale ụdị nke a ga -ewepụta. Ụfọdụ ụzọ ọzọ a ga -ewepụta iji kpọọ ya na console ga -adị PlayStation y Xbox, nke ị ga-enwe ohere iji soro ndị ọzọ gwuo egwu n'ịntanetị ma ọ bụ kpọọ egwuregwu na mpaghara ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
N'otu ụzọ ahụ ọ ga-adị kpọọ n’ígwé ojii site na nyiwe dị ka Steam na Stadia maka PC. Iji ha eme ihe, ị gaghị achọ ịnwe njikwa kachasị ọhụrụ n'ahịa ma ọ bụ kọmpụta nwere njirimara pụrụ iche nwee egwuregwu dị egwu.
Ihe ndị okike ya na -achọ bụ na ọtụtụ mmadụ enwere ike ịnweta Bayonetta 3. Yabụ ga-ebipụta na nsụgharị dị iche iche Na nke ị ga-egwu ga-adị mfe ma na-atọ ụtọ, ọ dabere na mmasị gị.
Ugbu a ọ bụrụ na ịnweghị ike ịzụta ụdị nsụgharị niile ịchọrọ kama ị kwesịrị ikpebi na naanị otu, echegbula, ụdị niile nwere nnukwu ntụrụndụ na nkwa na ị ga -enwe ọ enjoyụ. egwuregwu pụrụ iche ma n'otu n'otu na otu.
Ị na -achọ inweta Bayonetta 3? Lee ndị ọzọ gị
Ọ bụrụ na ihe ị chọrọ bụ nweta bayonetta 3, ị nanị mkpa ileta gị ụlọ ahịa kachasị amasị, gaa ebe ị na -aga mgbe niile. Mgbe ụbọchị mwepụta ahụ bịarutere, ị nwere ike ịchọta ya na nkasi obi niile dị ọnụ ọnụ.
Nke a dị mma karịa ihe ọ bụla egwuregwu maka consoles dị ka PlayStation, ma ọ bụ Xbox; nkasi obi nke ndị na -egwu ha na -enwe ahụ dị jụụ ma nwee ọ enjoyụ inwe mbụ nsụgharị nke egwuregwu.
Nhọrọ ọzọ, ọ bụrụ na ịchọghị ịhapụ ụlọ gị, bụ ịzụ ahịa n'ịntanetị. Ị nwere ike ime ha site na ụlọ ahịa egwuregwu vidio n'ịntanetị, ma ọ bụ nyiwe ntanetị, n'ụzọ dị mfe ma kwere nkwa.
Si zụọ ahịa na ụlọ ahịa ndị a n'ịntanetị, ị na -echekwa oge na mbọ na iwu gị ga -abịarute n'ọnụ ụzọ ụlọ gị, ma ọ bụ ị nwekwara ike ịrịọ ụdị nke mebere, budata ya ma wụnye ya na njikwa gị.
Mana nyiwe dị ka Stadia ma ọ bụ Steam, na -enye gị ohere ịnụ ụtọ mgbe ịkwụchara ụgwọ, na -eji sava ha, nke pụtara na ị nwere ike igwu egwu ma ọ bụrụhaala na ijikọ na ịntanetị na ịdenye aha.
Iringgba ụgwọ ọrụ a pụtara, na obere oge, a pere mpe karịa ịzụta egwuregwu mbụ, yana ọ na -enye gị ohere igwu ọtụtụ egwuregwu dị iche iche obere oge.
Mụta ịkpọ Bayonetta 3
Ọ dịghị ihe doro anya karịa okwu ahụ Omume na-eme ka nna ukwu, na ụzọ kacha mma isi bụrụ ihe kacha mma bụ itinye ya n'ọrụ. Ka ị na -arụ ọrụ, ka ị ga -enwekwu ọkachamara.
Otu ihe ahụ na -eme na egwuregwu. Ka ị na -enwekwu ndị agha, otú ahụ ka ị ga na -anabatakwu ozi na ụbụrụ gị ga -enwe ike iwu usoro dị mgbagwoju anya. Yabụ ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ mụta igwu egwu Bayonetta 3 Ihe mbụ ị ga -eme bụ ịdị jụụ ma na -eme ya ugboro ugboro.
Ga-abụ ihe kasị mma ị ga- zute ndị iro gị. Ofzọ mmegharị ha, atụmatụ na usoro ha. Iji ghọta ha, ọ ga -adị mkpa ka ị nyochaa ha nke ọma. Ha bụ ihe ga -abara gị uru imeri ha. Ị ga -enwe ike ịchọpụta ihe ike ya na adịghị ike ya bụ. Ọzọkwa, ị chọrọ mara omume nke ndị na-emegide gị. Ma ha bụ ndị NPC ma ọ bụ ezigbo ndị egwuregwu, ha niile na -etinye nka na atụmatụ nke, ọ bụrụ na ịmara ha, ị nwere ike chọpụta otu esi ewepụ ha ngwa ngwa wee bụrụ nke kacha mma.
Ọ bụrụ na ị nwere ike nyochaa ha nke ọma, ị ga -ahụ adịghị ike ha, ị ga -amakwa otu esi erite uru na mmejọ ha. Ịmara onye iro gị na -enye gị ohere karịa ya.
Mana chere, ajụjụ ahụ akwụsịghị na onye mmegide. Ị ga -erute n'ọkwa ebe ị ga -agbasi ike nke ukwuu, na ị ga -eme onwe gị onye iro gị, n'ụzọ dị mma. Na-eche echiche ụzọ aghụghọ gị ma na-arụ ọrụ ka mma kwa ụbọchị. You nwere ike ịdị mma mgbe niile.
N'oge nke ị na-amụ ndị asọmpi ndị ọzọ ị nwere ike ịhụ ebe ha na -eme nke ọma na ebe ha na -adịghị ike. Ihe kachasị mma ị nwere ike ime bụ iwere ihe niile na -enyere gị aka, ọ bụchaghị ime atụmatụ ha otu, kama gbasara ịmụta ihe n'aka ha na ịgbakwunye ụdị nke gị.
N'ikpeazụ, tụnye atụmatụ, jiri nwayọ gwuo egwu, na -egwu egwu mgbe niile. Ndị a bụ nnukwu ogige iji bụrụ onye egwu Bayonetta 3. Soro ndụmọdụ ndị a, ị ga -abịarukwu nso ghọọ kpakpando.
Pịa ịkọrọ na Twitter (Emepe na windo ọhụrụ)
Pịa ịkọrọ na Facebook (Emepe na windo ọhụrụ)
Pịa ịkọrọ na LinkedIn (Emepe na windo ọhụrụ)
Pịa ịkọrọ na Pinterest (Emepe na windo ọhụrụ)
Pịa ịkọrọ na WhatsApp (Emepe na windo ọhụrụ)
Pịa ịkọrọ na Tumblr (Emepe na windo ọhụrụ)
Pịa ịkọrọ na akpa (Emepe na windo ọhụrụ)
Ezitere na August 13, 2021
Ozi niile ịchọrọ ịma ka ịmalite ịmalite ịkpọ Elden Ring
Elden Ring bụ otu n'ime egwuregwu ndị ahụ na-agbakwụnyekwu ndị na-eso ụzọ. Ụzọ na -adọrọ mmasị ya nke ịzụlite na itinye onye ọkpụkpọ ahụ na -eme ka ndị na -eso ụzọ ya bụrụ ndị na -eguzosi ike n'ihe nakwa na ndị na -enwebeghị mmasị na ya chọrọ igwu ya.
Maka ndị na -amalite ịnwale mgbanaka Elden, anyị na -enye ntuziaka zuru oke nke nwere ụfọdụ ndụmọdụ bara ezigbo uru. Site na ozi a, ị nwere ike nweta ọhụhụ nke ọma ihe ị ga -eme iji bido gwuo egwu na -enweghị ọgba aghara.
Releasebọchị ntọhapụ egwuregwu
Ndị na-eso ụzọ Elden Ring Ha kwesiri ibido maka njikere nke egwuregwu iji mee n'oge adịghị anya ụbọchị mwepụta, nke ha nwere ike igwu na consoles-dị. Site na ohere egwuregwu vidiyo mara mma, ọbịbịa nke egwuregwu vidiyo na -atụ anya inwe ike ịnụ ụtọ ihe ọhụrụ niile ọ ga -eweta.
Ndụmọdụ maka ịpụ na mgbanaka Elden
Ọ na-emetụkwa, malite icheta ndụmọdụ iji nyere gị aka, ka oge Elden Ring dị n'aka gị, ị nwere ike inweta egwuregwu na arụmọrụ ka mma. Anyị nwere ụfọdụ maka gị.
Nweta ahụmịhe ma larịị: Ọganiihu na mgbanwe ga -enye gị ohere ndị ọzọ, ị ga -enwekwa ohere karịa ndị egwuregwu ndị ọzọ. N'ụzọ dị otu a, ị ga -arịgo ma meziwanye ohere nke agwa gị, na mgbakwunye na nka gị.
Chọpụta ihe Elden Ring nwere: Agaghị enwe ngwa agha ka mma karịa ozi. Iburu n'uche ihe bụ ihe egwuregwu vidiyo a na -etinye n'aka gị iji merie ihe mgbochi dị mkpa iji dozie nsogbu ngwa ngwa
Ahụmahụ ụzọ dị iche iche igwu egwu: Mgbe ụfọdụ a ụzọ egwu Ọ na -arụrụ anyị ọrụ, mana site na ịnwale nhọrọ ọhụrụ, ị nwere ohere ka mma ịchọta ụzọ isi melite na iji amamihe wee nweta ebumnuche ahụ.
Mee ntọala ịchọrọ: Ime mgbanwe ndị ị nwere ike na ntọala egwuregwu nwere ike inyere gị aka inwe udo mgbe ị na -egwu egwuregwu ahụ. Mgbanwe ụfọdụ ị nwere ike ịme nwere ike ime na enyo, ụda, njikwa, ma ọ bụ ihe ọ bụla na -enye gị ohere igwu egwu ka mma.
Kedu ụdị usoro ị nwere ike igwu Elden Ring n'ịntanetị?
Ọ dabara nke ọma, ị nwere ike igwu egwuregwu ahụ na nkasi obi dị iche iche yana na kọmpụta, yabụ enweghị ihe ngọpụ ịkwụsị ịnwale ụdị a ga -ewepụta. Ụfọdụ ụzọ ọzọ a ga -ahụ na ọ ga -atọ ya ụtọ na console bụ PlayStation y Xbox, na nke ga-ekwe omume nke soro ndị egwuregwu ndị ọzọ nwee egwuregwu n'ịntanetị ma ọ bụ kpọọ egwuregwu n'ụlọ ma ọ bụrụ na-amasị gị.
Ebumnuche bụ isi nke malite na nsụgharị dị iche iche bụ na egwuregwu vidiyo jisiri ike rute ndị na -ege ntị kacha nwee ike yana ịkekọrịta na ndị egwuregwu ndị ọzọ dị mfe ma na -atọ ụtọ. Dabere na mmasị gị, ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ ọ bụla nke Elden Ring nyere.
N'otu aka ahụ, nsụgharị niile na -atọ ọchị ma na -enye ohere nwee ọmarịcha ahụmahụ n'otu n'otu na otu.
Ekele maka ụzọ ndị a ị nwere ike nweta Elden Ring
Ihe mbụ ị ga-eme zụta Elden Ring bụ ịga ụlọ ahịa kacha dịrị gị nso, ma ọ bụ nke ị na -aga mgbe niile. Ka ahapụchara egwuregwu gị, yana ụbọchị ndị na -esote, ị ga -enwe ike ịhụ ya ka ọ dị na nyiwe ya niile.
Maka ihe niile ezigbo ndị na-egwu egwuregwu, ọ ka mma mgbe niile inwe mbụ ụdị nke egwuregwu vidiyo. N'ụzọ dị otu a, ha na -arụkọ ọrụ na imepụta ọtụtụ egwuregwu vidiyo ma na -akwado nnukwu franchise.
Mana ọ bụghị naanị na ị ga -ahụ ya na ụlọ ọrụ anụ ahụ, mana ị ga -enwekwa ike ịzụta ya ụlọ ahịa egwuregwu vidio n'ịntanetị ma ọ bụ nyiwe ntanetị nke ị nwere naanị akaụntụ, ị ga-enwe ike ịzụta.
Si ị zụrụ n'ụlọ ahịa ndị a dị n'ịntanetị, ị na -echekwa oge na mbọ na iwu gị ga -erute n'ọnụ ụzọ gị, ma ọ bụ ị nwekwara ike ịzụta ụdị nke mebere, budata ya wee wụnye ya na njikwa gị.
Na mgbakwunye na ụlọ ahịa egwuregwu vidiyo, enwere nhọrọ igwu egwu site na iwere ngwungwu ndenye aha. N'okwu a, ị naghị azụta egwuregwu n'onwe ya, mana ikike iji nnukwu aha dị iche iche maka oge a kara aka. Nke a bụ ikpe Stadia ma ọ bụ Steam.
Ihe kachasị mma maka nyiwe ndị a bụ ọnụahịa ha. Lezienụ ndenye aha bụ dị oke ọnụ karịa karịa ịzụta egwuregwu vidiyo, yana ọ na -eme ka ọ dị mfe ịbanye n'ọtụtụ aha.
Kedu otu esi abawanye na Elden Ring?
Anyị niile na -amalite dị ka ndị mbido oge ọ bụla anyị nwetara ihe dị iche, n'agbanyeghị ahụmịhe gara aga anyị nwere na mpaghara ndị ọzọ, ịmalite ihe site na mbido bụ ahụmịhe ọhụụ, mana zuru ike, site na mbọ ị ga -abụ ọkachamara.
Dịka anyị gwarala gị, ị kwesịrị ịdị na -eme ihe ọ bụla ị na -atụ anya ime n'ụzọ dị mma. Oge a, egwuregwu vidiyo. Ka ị na -emekwu ihe, otú ahụ ka ị ga -enwe ike mụta ihe nzuzo nke mgbanaka Elden. Nke ahụ bụ ikpe, ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ bụrụ onye ọkpụkpọ Elden Ring kacha mma, mgbe ahụ anyị na-akwado ka ịmalite ịmalite, ị ga-enweta ya na nnọgidesi ike.
Iji bụrụ ihe kachasị mma ị ga-achọ zute ndi iro gi. Ụdị mmegharị ha, atụmatụ ha na nka ha. Maka nke a, ị ga -enyocha ha nke ọma. Ha bụ obere nkọwa nke ga -aba uru nke ukwuu imeri ha. Ị ga -enwe ike ịchọpụta ihe bụ uru na adịghị ike ya. Jidere ihe ga -abara gị uru ma jiri ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na ịmee ya nke ọma, ị nwere ike wepu ha ngwa ngwa. Ma ha bụ ndị NPC ma ọ bụ ezigbo ndị egwuregwu, ha niile na -eji nka na atụmatụ nke, ọ bụrụ na ịmara ha, ị nwere ike ịchọpụta ka esi akụ ha ihe n'ụzọ dị mfe na ị nwere ike pụọ.
Ozugbo ịchọpụtasịrị ihe ndapụta ya bụ, kụọ ya ebe ọ kacha ewute ya wee tie ya ihe. Ịbụ otu nzọ ụkwụ n'ihu bụ nnukwu uru mgbe niile.
Mana chere, okwu ejedebeghị na onye mmegide. Ị ga -erute ebe ị ga -agbasi ike nke ukwuu, na ị ga -abụ onye mmegide nke gị, n'ụzọ dị mma. Mụọ ụzọ aghụghọ gị ma na-eme ka mma kwa ụbọchị. Nwere ike imeziwanye oge niile.
Na mgbakwunye na chọta adịghị ike nke ndị na-azọ gị, ị ga -achọpụtakwa ebe ike ha dị. Mgbe ị na -aga ịbụ onye kachasị mma, ị ga -achọpụta ihe ị ga -a forụ maka emume ọ bụla. Ọ bụrụ otu a, ọ gaghị adị njọ ịhụ akụkụ nke na -arụrụ ndị egwuregwu ndị ọzọ ma mezie ha ka ụdị egwuregwu gị si dị.
N'ikpeazụ, wetuo obi, awụlikwa elu n'ime ihe ma tụọ aro ka ọ dị mma ga -eme ka ọ dịrị gị mfe ịmeghachi n'ụzọ ziri ezi, wee nweta nsonaazụ kacha mma. Ọ bụrụ na ijikwa ịgbaso ntuziaka ndị a, ị nwere ike ịbụ nke kacha mma na Elden Ring.
Ezitere na August 5, 2021
Ewezuga Ezi & Ọjọọ 2 Ntuziaka egwuregwu
Otu n'ime egwuregwu ahụ na-enwetakwu fans Ịna -ewekwu ume bụ Karịa Ezi & Ihe Ọjọọ 2. Egwuregwu a na -enye gị ụzọ na -atọ ụtọ ma na -adọrọ mmasị iji mee egwuregwu ndị a na -agaghị emeri emeri, ma ị bụ onye ọhụrụ ma ọ bụ na ị gwaburu egwuregwu ahụ na mbụ.
Ugbu a, ozi anyị na -enye na ntuziaka a nwere ike ịba uru nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị na -amalite igwu Beyond Good & Ọjọọ 2 wee chọọ inwe uru. Site na ndụmọdụ anyị ga -enye gị n'okpuru, ị nwere ike ghara ịbụ ọkachamara, mana agbanyeghị, ị ga -enwe ozi bụ isi nke ga -enyere gị aka
Kedu mgbe mmalite nke Beyond Good & Ọjọọ 2?
Edeelarị ya na ụbọchị ntọhapụ Gafee Ezi & Ọjọọ 2 bụrụ ụbọchị mwepụta. consoles-dị.
Aghụghọ iji pụta ìhè na Beyond Good & Ọjọọ 2
Yabụ, ọ ga-adị mma ịmalite ịkpọtụrụ ndị ndụmọdụ ga -enyere gị aka, yabụ mgbe Beyond Good & Ọjọọ 2 dị n'aka gị, nwee egwuregwu na-arụpụta ihe ka mma. Anyị nwere ụfọdụ maka gị.
Nọgide na-eme ihe ma bulie ọkwa gị: Izucha atụmatụ gị na iru ọkwa dị elu ga -eji nwayọ mee gị onye ọkpụkpọ kacha mma. Na mgbakwunye, ịkwaga n'ime egwuregwu na -emepe ngwaọrụ ga -enyere gị aka imezu ebumnuche gị.
Chọpụta ihe Beyond Good & Ọjọọ 2 na -enye: Enweghị ngwa ọgụ bara uru karịa ozi. Iburu n'uche nke bụ ngwaọrụ egwuregwu vidiyo a na -etinye n'aka gị iji merie ihe mgbochi dị mma ịzaghachi nsogbu ngwa ngwa.
Mejuputa atumatu gi n'uzo di iche: Mgbe ndị ọzọ usoro Ka ị na-anwale, ị nwere ike ịchọta ma ọ bụ megharịa nke ga - eme gị egwuregwu kachasị mma.
Mee nhazi maka njikwa na ntọala: Gbanwee mkpebi, njikwa na ntọala niile na -enye ya ohere ịmere gị egwuregwu dị mfe. Ịhazi njikwa na -enye gị ohere idobe egwuregwu ahụ n'ogo nkasi obi gị iji nweta nsonaazụ dị irè n'oge egwuregwu.
Usoro nke ị nwere ike ịnwale Beyond Good & Ọjọọ 2
Ọhụrụ nke Beyond Good & Ọjọọ 2 na -ekpuchi ụtọ niile, ọ bụrụ na ị bụ onye na -akwado nkasi obi ma ọ bụ na -ahọrọ PC, ị ga -enwe ike ịnwale egwuregwu vidiyo n'ụdị dị iche iche. N'ihi na console, ị nwere ike nweta ya maka Egwuregwu, Xbox , n'etiti ndị ọzọ, na-enye gị ohere ịnwale n'ụlọ ma ọ bụ jikọọ na egwuregwu ndị ọzọ na ntanetị.
Ma ị nwekwara ike kpọọ n’ígwé ojii site na nyiwe dị ka Steam na Stadia maka kọmputa. Site na ndị a, ị nwere ike ime na -enweghị njikwa kachasị ọhụrụ n'ahịa ma ọ bụ PC nwere atụmatụ dị elu iji kpọọ egwuregwu na-atọ ụtọ.
Ebumnobi nke hapụ na nsụgharị dị iche iche bụ na egwuregwu ahụ rutere ndị na -ege ntị sara mbara yana nke ahụ, iso ndị egwuregwu ndị ọzọ na -egwu egwu nwere ike ịnweta ma na -atọ ụtọ. Dabere na mmasị gị, ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ ọ bụla nke Beyond Good & Ọjọọ 2 na -enye.
Ugbu a ọ bụrụ na ịnweghị ike inweta ọtụtụ nsụgharị dịka ị ga -achọ na ị ga -ekpebi naanị otu, enwela obi mgbawa, ụdị nke ọ bụla nwere nnukwu ọ funụ na nkwa na ị ga -adị ndụ. Unbeatable ọkụ ọkụ ma n'otu n'otu na ndị ọzọ egwuregwu.
Ebee ka azụta Beyond Good & Ọjọọ 2?
Ihe mbụ ị ga - eme weta Beyond Good & Ọjọọ 2 bụ ịga ụlọ ahịa kacha dịrị ụlọ gị nso, ma ọ bụ nke ị na -aga mgbe niile. Ka ahapụchara egwuregwu gị, na ụbọchị ndị ga -aga n'ihu, ị ga -enwe ike ịhụ na ọ dabara na nyiwe ya niile.
Ọ bụ ihe dị mma ụbọchị ndị a na ndị na -akwado nkasi obi dịka PlayStation, ma ọ bụ Xbox na -enwekarị obi ụtọ ịnwe mbụ nsụgharị nke niile releases.
Ma ọ bụrụ na ịnweghị ụlọ ahịa egwuregwu vidiyo dị nso, echegbula, ị nwekwara ike ịzụta egwuregwu vidiyo kachasị amasị gị na ụlọ ahịa egwuregwu vidio n'ịntanetị, ma ọ bụ n’ime nyiwe ntanetị, ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ ịzụta.
Zụta na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị Ọ bụ otu ihe ahụ site n'ịzụrụ n'ụlọ, n'enweghị nsogbu na ntụsara ahụ. Na mgbakwunye, nhọrọ a na -enye ohere ka aha gị rute n'ọnụ ụzọ ụlọ gị ma ọ bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ, ị nwere ike họrọ ụdị nke mebere, nke ị rụnyere ozugbo na njikwa gị.
Enwekwara ọrụ ikpo okwu egwuregwu vidiyo ntinye aha. N'elu ikpo okwu ndị a ị nwere ike igwu egwu site na iji sava nke ikpo okwu, jiri ọrụ nke bi n'igwe ojii. Maka nke a, ị ga -enwerịrị njikọ ịntanetị wee kwụọ ụgwọ ndenye aha.
Iringgba ụgwọ ọrụ a pụtara, na obere oge, a obere outlay karịa inweta egwuregwu vidiyo mbụ, gbakwunyere na ọ na -enyere aka igwu ọtụtụ egwuregwu dị iche iche maka otu oge.
Ndụmọdụ ụfọdụ ka ha bụrụ nke kacha mma na Beyond Good & Ọjọọ 2
Ọ dịghị ihe dị mma karịa okwu ahụ Omume na-eme ka nna ukwu, na ụzọ kacha mma isi meziwanye ihe bụ itinye ya n'ọrụ. Ka ị na -arụkwu ọrụ, ị ga -amụtakwu nkà.
Otu echiche a dịkwa mkpa maka egwuregwu vidiyo. Ọ bụrụ na ọ na -agụsi gị agụụ ike ịbụ onye nkuzi, ọ dị gị mkpa ịme ihe. Site na nke a, ụbụrụ gị ga -ahazi n'iwu na ọgụgụ isi nke Beyond Good & Ọjọọ 2, ịmepụta atụmatụ na atụmatụ dị mma. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ bụrụ onye nkuzi na Beyond Good & Ọjọọ 2, malite na-eme.
Ihe ọzọ nwere ike inyere gị ezigbo aka mụọ omume ndị iro gị. Ịghọta mmegharị onye iro na ịtụle ụzọ ha nwere ike isi mee ka ị matakwuo adịghị ike ha. Ị ga -enwe ike ịchọpụta ihe bụ uru na adịghị ike ya. Ị chọkwara mara ka esi eme ndị iro gị. Ma ha bụ ndị NPC ma ọ bụ ezigbo ndị egwuregwu, ha niile na -eji nka na usoro nke, ọ bụrụ n'ị mụta ha, ị ga -enwe ike ịchọpụta otu esi ewepụ ha ngwa ngwa wee bụrụ nke kacha mma.
Mgbe ị chọpụtara ihe adịghị ike ya, wakpo ya ebe ọ kacha ewute ya wee gbuo ya. Ịga otu nzọ ụkwụ n'ihu na -apụtakarị ohere ka mma.
N'otu aka ahụ chọpụta ihe adịghị ike gị Ọ ga -enyere gị aka ime ka ha sie ike ma mee ka ị sie ike, yabụ tụleghachi ụzọ gị wee merie ha oge ọ bụla ị nwere ohere. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ha enyerela gị aka na mbụ, n'ezie ị nwere ike too karịa.
del nyocha nke ndị na-emegide gị Ị ga -ahụ ụdị ihe abụọ: nke ha na -eme nke ọma na nke ha na -emechaghị mma. N'ime ndị ọjọọ anyị ekwuola okwu; jiri ha mee ihe. Ọ dị mma ịmụta ihe n'aka ndị na -eme nke ọma. Ọ bụghị naanị iyingomi ya, ọ kacha mma ka ịhazigharị ya na atụmatụ gị na ụzọ egwu gị, ka ị ga n'ihu na oghere ebe ị na -eme nke ọma.
N'ikpeazụ, emela ngwa ngwa, hazie atụmatụ gị nke ọma ma tọọ ihe mgbaru ọsọ dị mkpirikpi. N'ụzọ dị otu a, ị ga -eji nwayọ rute ebumnuche gị. Ọ bụrụ n’ịgbaso ndụmọdụ ndị a, ụbọchị ọ bụla ị ga -abịaru nso ịbụ ihe kachasị mma na Ezi na Ihe Ọjọọ 2.
Ezitere na August 2, 2021
Akwụkwọ ntuziaka egwuregwu vidiyo nke Dead Island 2
Dead Island 2 bụ otu n'ime egwuregwu vidio ndị ahụ na-enweta ọtụtụ ndị Fans. Ọmarịcha ụzọ mkpughe ya na itinye onye na -egwu egwu na -eme ka ndị na -egwu ya bụrụ ndị na -eguzosi ike n'ihe nakwa na ndị na -egwubeghị ya chọrọ ịnwale ya.
Maka ndị ọhụrụ na Dead Island 2, anyị na -enye ntuziaka a zuru oke nke nwere ndụmọdụ bara ezigbo uru. Site na ozi a ị ga -enwe ike inwe echiche sara mbara nke ihe ị ga -emerịrị iji malite igwu egwu na -efu efu kpamkpam.
Ọ bụ na-ama ọhaneze na igba egbe oge nke 2 Nwụrụ Anwụ bụrụ ụbọchị mwepụtaEbe ọ bụ na enyere ozi a, ndị na -eso ụzọ ya enwebeghị ike inye aka mana nwee obi ụtọ ịmara ụdị ohere ọhụrụ ụdị a ga -eweta nke enwere ike ịnụ ụtọ ya. consoles-dị.
Ndụmọdụ iji pụọ iche na Dead Island 2
Nke a bụ oge kacha mma ịkpọtụrụ gị ụfọdụ aghụghọ ka ị nwee ike ịme egwuregwu na Dead Island 2 nwere ezigbo nsonaazụYa mere, mgbe egwuregwu a tọhapụrụ ị ga-ahụ onwe gị otu nzọụkwụ n'ihu. Edere ihe ndị a n'okpuru.
Mụbaa ahụmịhe gị na ọkwa elu: Ịkwalite na mgbanwe ga -emepere gị ụzọ, ị ga -erite uru karịa ndị egwuregwu ndị ọzọ. Nke a bụ otu ị ga -esi gbagote ma melite ohere nke agwa gị, na mgbakwunye na nka gị.
Mụta maka ngwaọrụ ị nwere ike iji na Dead Island 2: Ihe ga -eme ka ị nwekwuo ọganihu bụ ịmara ngwa ọrụ egwuregwu vidiyo na -enye gị. Site n'ịmara otu na mgbe ị ga -eji ihe Dead Island 2 na -enye gị, ị ga -enwe ike iji ya n'oge kwesịrị ekwesị iji ruo ebumnuche.
Gbalịa ọtụtụ ụzọ igwu egwu: Mgbe ụfọdụ a ụzọ egwu Ọ na-arụ ọrụ maka anyị, mana site na ịnwale nhọrọ ọhụrụ ị nwere ohere ka mma nke ịchọpụta ụzọ iji melite ma nweta ihe mgbaru ọsọ ahụ n'ụzọ dị mfe.
Mee ka ntọala ahụ dịkwuo gị mma: Inwe egwuregwu nke ntọala na -enye gị nkasi obi na -enye gị ohere ị nweta nsonaazụ kacha mma. Ịgbanwe ihuenyo na ntọala ụda yana ịtụ njikwa dị ka mmasị gị si dị, na -enye aka.
Moddị ebe ị nwere ike igwu Dead Island 2
A gaghị enwe onye ọ bụla nke na-anaghị esonye, Dead Island 2 ga -adịrị ma ndị na -ahọrọ consoles ma ọ bụ PC, na -eme ka ụzọ abụọ dị. N'ime nkasi obi nke ga -enye ohere nke ịnụ ụtọ egwuregwu vidiyo bụ PlayStation y Xbox, ebe ndị egwuregwu nwere ike kpọọ na mpaghara ma ọ bụ site na ijikọ na egwuregwu ndị ọzọ n'ịntanetị.
Ma ọ ga-adịkwa kpọọ n’ígwé ojii site na peeji nke dị ka Steam na Stadia na PC. Iji ha, ọ gaghị adị mkpa iji nweta ihe njikwa ọhụrụ na ahịa ma ọ bụ kọmputa nwere njirimara pụrụ iche na-enwe obi uto egwuregwu di egwu
N'otu aka ahụ, a ga-enwe ohere iji kpọọ n’ígwé ojii, mgbe ahụ ịgaghị enwe ndị otu dị elu iji nwalee Dead Island 2. Na sava maka nyiwe dị ka Steam na Stadia, ị ga -enwe ike kpọọ egwuregwu na-atọ ụtọ ngwa ngwa.
N’ezie, ebum n’uche bụ ime ka obi tọọ ndị na-ege ntị kachasị mma. Maka nke a ị ga -ahụ ụdị dị iche iche nke Dead Island 2 nke na -aza ọtụtụ mkpa, ihe niile ga -adabere na mmasị nke onye ọ bụla nwere mgbe ị na -ahọrọ nhọrọ kacha dabara.
Ụdị nke ọ bụla na -enye ọ funụ nke ukwuu, yabụ echegbula ma ọ bụrụ na ị ga -ekpebi otu n'ime ha. Nwee ahụmịhe dị egwu nke ị ga -enwe ike ịnwale n'otu n'otu yana ndị ọzọ Ọ dị mma.
Site n'ụzọ ndị a ị nwere ike zụta Dead Island 2
para nweta Dead Island 2 ị kwesịrị ị na-aga na Storelọ ahịa ụlọ ahịa nke ahụ dị nso ma ọ bụ gaa na nke gị ji ntụkwasị obi karịa. Mgbe mwepụta ahụ gachara, ị ga -ahụ usoro ya niile na ọnụ ahịa enwere ike ịnweta.
Nke a bụ ihe kachasị nke niile egwuregwu maka consoles dị ka PlayStation, ma ọ bụ Xbox; nkasi obi nke ndị na -eji ya nwere ntụsara ahụ ma hụkwa n'anya inwe mbụ nsụgharị nke egwuregwu.
Mana ụlọ ọrụ anụ ahụ abụghị naanị nhọrọ. Ọ bụrụ na ịnweghị ntọala ọ bụla dị nso, ma ọ bụ na ịchọghị ịhapụ ụlọ gị, ị nwere ike zụta ha na ụlọ ahịa dị n'ịntanetịma ọ bụ nyiwe ntanetị.
Isi okwu nke ụlọ ahịa ndị a bụ nke ahụ ịkwesighi ịhapụ ụlọ gị ịzụrụ ihe. Egwuregwu ahụ rutere n'ọnụ ụzọ gị, ma ọ bụ ịnwere ike ibudata ya mgbe ịkwụchara ụgwọ wee wụnye ya ozugbo.
Mana nyiwe dị ka Stadia ma ọ bụ Steam, na -enye gị ohere ịnụ ụtọ mgbe ịkwụchara ụgwọ, jiri sava ha, nke pụtara na ị nwere ike igwu egwu oge ọ bụla ejikọrọ gị na ịntanetị yana ịdenye aha.
Iji ọrụ a eme ihe pụtara, na obere oge, a obere ụgwọ karịa inweta egwuregwu vidiyo mbụ, gbakwunyere na ọ na -enyere aka iji ọtụtụ utu aha ruo oge ụfọdụ.
Kedu ka ị ga -esi ka mma na Dead Island 2?
Anyị niile na -amalite ịbụ ndị ọsụ ụzọ oge ọ bụla anyị nwetara ihe ọhụrụ, n'agbanyeghị ihe ọmụma gara aga anyị nwere na mpaghara ndị ọzọ, ịnwale ihe site na ọkọ na -ebutekarị mmetụta dị iche, mana ịdị jụụ, na ọrụ ị bụrụ ọkachamara.
Otu ihe ahụ maka egwuregwu vidiyo. Ka ị na -enwekwu ahụmịhe, nzaghachi ka mma ị ga -enwe na ụbụrụ gị ga-enwe ikike iwulite usoro dị mma. Ya mere oburu na ihe ichoro bu mụta igwu egwu Dead Island 2 ihe ikwesiri ime bu inwe ndidi ma na-eme ihe mgbe niile.
Ihe ọzọ nwere ike ime ka ọrụ gị dịrị gị mfe nyochaa atụmatụ nke ndị iro gị. Ịkọ amụma mmegharị na ịghọta ụzọ aghụghọ ha nwere ike ime ka ị bịaruo nso ịkọwa ebe adịghị ike ha. Ị ga -enwe ike ịchọta ihe ọ na -eme nke ọma na ihe adịghị mma. Ị chọkwara mụta otú e si egwu site na ndị iro gị. Ma ha bụ ndị NPC ma ọ bụ ezigbo ndị egwuregwu, ha niile na -eji nka na usoro nke, ọ bụrụ na ịmara ha, ị nwere ike chọpụta otu esi emeri ha n'ụzọ dị mfe wee bụrụ nke kacha mma.
Site n'ịmara ihe onye iro na -eme nke ọma na ihe ọ na -emejọ, ị ga -enwe uru karịa ya. Ọ dabere na ahụmịhe gị ka ị nwee ike irite uru na uru ahụ wee merie.
Ọzọkwa, mata ihe adighi ike gi Ọ ga -enyere gị aka ime ka ha sie ike ma mee ka ị sie ike, yabụ, mụtakwa atụmatụ gị wee meziwanye ha oge ọ bụla ị nwere ohere. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ha ejerela gị ozi na mbụ, n'ezie ị nwere ike meziwanye.
del nyocha nke ndị na-emegide gị Ị ga -achọpụta ihe abụọ: ihe dị mma na ihe na -adịchaghị mma na ya. N'ime ndị ọjọọ anyị ekwupụtala onwe anyị; jiri ha mee ihe. Ihe ọma dị mma ịmụta ihe. Ọ bụghị naanị ime ya dịka ọ dị, ihe kachasị mma bụ ịkpụ ya na atụmatụ gị na ụzọ egwu gị, ka ị ga n'ihu na mpaghara ebe ị na -enwe ahụ iru ala.
N'ikpeazụ, emela ihe nzuzu, rapara na ụzọ gị wee tọọ ihe mgbaru ọsọ dị mkpirikpi. N'ụzọ dị otu a, ị ga -enwe ike nweta ntakịrị ihe mgbaru ọsọ gị. Ọ bụrụ na i soro ndụmọdụ ndị a, ị ga -abịaru nso ịbụ otu kachasị mma na Dead Island 2.
Ihe niile ịchọrọ ịma ka ịmalite ịmalite ịnụ ụtọ Beyond Good & Ọjọọ 2
Otu n'ime egwuregwu vidio ahụ ọ na-aghọwanye ewu ewu Ịna -enwekwu ọganihu bụ Karịa Ezi & Ihe Ọjọọ 2. Egwuregwu vidio a na -enye gị ahụmịhe na -atọ ụtọ nke ị ga -eji zụlite egwuregwu na -enweghị atụ, ma ị bụ onye mbido ma ọ bụ na ị gwuola egwuregwu ahụ na mbụ.
Na mgbakwunye, ozi dị na ntuziaka a nwere ike ịba uru nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị na -amalite na Beyond Good & Ọjọọ 2 wee chọọ inwe uru. Site na ndụmọdụ anyị nwere maka gị ugbu a, ị nwere ike ghara ịbụ ọkachamara, mana ị ga -enweta ozi nke ga -enyere gị aka
Fans nke Gafee Ezi & Ọjọọ 2 na-na-njikere enweta premiere nke egwuregwu nnọọ anya na ụbọchị mwepụta, nke ị nwere ike ịnụ ụtọ ya consoles-dị. Site na ohere egwuregwu vidiyo dị ịtụnanya, a na -atụ anya mbata egwuregwu vidiyo ga -enwe ike ịnụ ụtọ akụkọ niile ọ ga -eweta.
Ndụmọdụ maka ịpụ iche na Beyond Good & Ọjọọ 2
O doro anya na ọ bụ ohere kachasị mma iji nye gị ụfọdụ aghụghọ na -eme ka ọ dịrị gị mfe ịme egwuregwu dị ịtụnanya maka mgbe Beyond Good & Ọjọọ 2 dị na mkpịsị aka gị. Fọdụ bụ ndị a.
Mụbaa ahụmịhe gị ma bulie ọkwa gị: Ọganihu na mgbanwe ga -enye gị ohere ndị ọzọ, ị ga -enwekwa uru n'ihe metụtara ndị egwuregwu ndị ọzọ. Nke a bụ otu ị ga -esi merie ma melite ohere nke agwa gị, na mgbakwunye na nka gị.
Chọpụta ihe Beyond Good & Ọjọọ 2 na -enye gị: Ọ bụrụ na ihe ga -enye gị ohere, ọ bụ "mara." N'ịkọwapụta nke bụ ngwa egwuregwu a na otu enwere ike iji ya dị mkpa iji merie ihe mgbochi nwere ike ịdị na egwuregwu ahụ
Jiri usoro ọhụụ: Ọ bụrụgodị na i mere a atụmatụ Na nke ị na-enwe afọ ojuju, na-agbalị ihe ọhụrụ mgbe niile, ebe ọ bụ na ọ na-enye gị ohere ịchọpụta usoro bara uru nke ga-enye gị ohere imeziwanye.
Gbanwee ntọala ịchọrọ: Ịme mgbanwe ị chọrọ na ntọala egwuregwu vidiyo ga -enyere gị aka ịnagide ịdị mfe mgbe ị na -egwu egwu. Otu ntọala a ga -agbanwe nwere ike metụta mkpebi, ọdịyo, njikwa ma ọ bụ ihe ọ bụla na -enye gị ohere ịrụ nke ọma.
Nyiwe nke a ga -akpọ Beyond Good & Ọjọọ 2
Ọhụrụ ụdị Beyond Good & Ọjọọ 2 bụ maka onye ọ bụla, ọ bụrụ na ị bụ onye na -akwado nkasi obi ma ọ bụ na -ahọrọ PC, enwere ike nwale egwuregwu di iche-iche. N'ihi na console, ị nwere ike nweta ya maka Egwuregwu, Xbox na ndị ọzọ, na-enye gị ohere ịnwale n'ụlọ ma ọ bụ jikọọ na ndị ọzọ ndị mmadụ n'ịntanetị.
N'otu ụzọ ahụ ọ ga-adị kpọọ n’ígwé ojii na -eji ibe dị ka Steam na Stadia na kọmputa. Site na ndị a ọ gaghị adị mkpa ịnwe njikwa ọhụrụ na ahịa ma ọ bụ kọmpụta nwere njirimara pụrụ iche nwee egwuregwu
Ihe ị họọrọ ga -enwe ihe ọzọ gbasara mmasị gị na mmefu ego gị. N'ụzọ dị otú a ị nwere ike chọta Beyond Good & Ọjọọ 2 n'ụdị dị iche iche. Ihe a na -achọ bụ iru ndị na -ege ntị kachasị nwee ike ime ka ịnụ ụtọ egwuregwu dị mfe yana maka mmadụ niile.
N'otu aka ahụ, nsụgharị ọ bụla nwere nhọrọ nhọrọ ụtọ ma mee ka enwere ike nwee ọmarịcha ahụmịhe na-egwu n'otu n'otu ma ọ bụ n'otu.
Ekwesịrị m ịzụta Beyond Good & Ọjọọ 2, ebee ka m ga -aga?
Nzọụkwụ mbụ iji nweta Beyond Good & Ọjọọ 2 bụ ileta ụlọ ahịa kacha dịrị ụlọ gị nso, ma ọ bụ nke ị na -aga mgbe niile. Ozugbo ụbọchị mwepụta egwuregwu gị abịarutela, na ụbọchị sochirinụ, ị ga -ahụ ya dị na nyiwe ya niile.
Ọ bụ ikpe nke egwuregwu maka consoles dị ka PlayStation, ma ọ bụ Xbox. Karịsịa, maka ndị egwu niile na -ewepụta ezi mmetụta site n'inweta ya mbụ mbipute nke ọkacha mmasị gị egwuregwu.
Agbanyeghị, ọ bụghị naanị na ị ga-enweta ya n'ụlọ ahịa anụ ahụ, mana ị ga-enwekwa ike ịbanye na ya ụlọ ahịa egwuregwu vidio n'ịntanetị ma ọ bụ nyiwe ntanetị nke ị ga-enwe naanị otu akaụntụ iji zụọ ihe.
Si ị zụrụ n'ụlọ ahịa ndị a dị n'ịntanetị, ị na -echekwa oge na ọrụ na egwuregwu gị ga -erute n'ụlọ gị, ma ọ bụ ị nwekwara ike ịzụta ụdị nke mebere, budata ya wee wụnye ya na njikwa gị.
Ewezuga ụlọ ahịa egwuregwu vidiyo, enwere nhọrọ ọzọ nke igwu egwu n'okpuru ngwugwu ndenye aha. N'okwu a, ị naghị azụta egwuregwu n'onwe ya, mana ikike ịnụ ụtọ egwuregwu dị iche iche maka oge akọwapụtara. Nke a bụ ikpe Stadia ma ọ bụ Steam.
Iji ọrụ a eme ihe pụtara, na obere oge, a obere ụgwọ karịa ịzụta egwuregwu vidiyo mbụ, gbakwunyere na ọ na -enye gị ohere ịnụ ụtọ ọtụtụ aha n'otu oge.
Etu esi amuta igwu egwu gabiga ihe oma na ihe ojoo 2?
Anyị niile na -amalite dị ka ndị mbido oge ọ bụla anyị nwetara ihe ọhụrụ, n'agbanyeghị ahụmịhe gara aga anyị nwere n'akụkụ ndị ọzọ, ịmalite ihe site na mbido bụ ahụmịhe dị iche mgbe niile, mana dị jụụ, site na omume ị ga -abụ ọkachamara.
Nke Omume na-eme ka nna ukwu enwekwara ike iji ya n'egwuregwu. Ka ị na -emekwu ihe, ọ ga -aka mma ka ị na -eme mgbanwe na njikwa Beyond Good & Evil 2 na nzaghachi AI. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ bụrụ otu n'ime ihe kachasị mma na Beyond Good & Ọjọọ 2, juputa na ndidi na ezi uche, ma na-eme omume ogologo oge.
Ihe ọzọ na-enyere dịkwuo gị usoro bụ mụrụ ndị na-emegide gị. I nwere ike ịchọpụta ihe ọ na-eme n’ezie na ihe ọjọọ. Ichorokwa mara ka ndi iro gi si egwuri egwu. Ma ha bụ ndị NPC ma ọ bụ ezigbo ndị egwuregwu, ha niile na -etinye mmegharị na atụmatụ nke, ọ bụrụ na ịmara ha, ị ga -enwe ike ịchọpụta ka esi akụ ha ihe n'ụzọ dị mfe wee bụrụ nke kacha mma.
Mgbe ị chọpụtara ihe adịghị ike ya, kụọ ya ebe ọ kacha ewute ya wee merie ya. Ịbụ otu nzọ ụkwụ n'ihu bụ nnukwu uru mgbe niile.
Dị nnọọ ka ị tụlere onye gị na ya na-agba, ị ga-enwerịrị nyochaa ma ghọta usoro nke aka gi na nsonaazụ ha na -enye gị. Ọbụlagodi na ị na -eme nke ọma, ị nwere ike meziwanye n'otu oge. Na -enyocha ụzọ gị kwa ụbọchị wee chọpụta ebe ị nwere ike ịka mma.
Na mgbakwunye na nweta mbibi nke ndị iro gị, ị ga -achọpụtakwa ebe ike ha dị. N'ọchịchọ gị ịbụ nke kacha mma, ị ga -amatarịrị ihe ị ga -ejide maka emume ọ bụla. Ebe ọ dị otu a, ọ gaghị adị njọ ịhụ ihe na -arụrụ ndị ọzọ ọrụ ma kpụzie ha n'ụzọ egwuregwu gị.
N'ikpeazụ, emela ihe ọsọ ọsọ, rapagidesie ike na atụmatụ gị wee tọọ ihe mgbaru ọsọ dị mkpirikpi. N'ụzọ dị otu a, ị ga -eji nwayọ rute ebumnuche gị. Ọ bụrụ na i soro ndụmọdụ ndị a, ị ga -abịaru nso ịbụ ihe kachasị mma na Ezi na Ihe Ọjọọ 2.
Copyright © 2021 · Edebere ikikere nile · AdraInformatica
90s ochie Gburugburu Organic · Ntanetị RSS · Nweta